Ganacsato Imaaraati ah oo doonaysa AC Milan – Gool FM
Roberto Mancini oo kusoo daray Mario Balotelli safka xulka qaranka Italy kahor kulammada bug-baxa ee loogu soo baxayo Koobka Adduunka
Ganacsato Imaaraati ah oo doonaysa AC Milan
Raage March 15, 2018
(Dubai) 15 Maarso 2018 – Waxaa lasoo werinayaa in qoyska reer boqor ee Dubai ay doonayaan inay iibsadaan kooxda AC Milan, xilli uu shaki badani ku jiro awoodda dhaqaale ee milkiilaha Yonghong Li.
Kooxda Rossoneri ayaa waxaa iibsadey ganacsadahan Chinese-ka ah horraantii bishii Abriil, isagoo lacagta qaar kasoo amaahday hay’ad Maraykan ah oo la yiraahdo Elliot Management, iyadoo haddii aan qaanteeda la bixinin ay sharikaddaasi la wareegi karto kooxdaasi.
Maanta ayuu Gazzetta dello Sport werinayaa inuu jiro qoys Imaaraati ah oo doonaya inuu iibsado Milan, kaasoo uu hoggaaminayo Saeed Al-Falasi. Ninkan ayaa ah ninka iska leh International Triangle Group, isagoo ka tirsan qoyska reer Al Maktoum ee ka arrimiya magaalada Dubai.
Marka laga soo tago Al-Falasi, waxaa kale oo Milan xiisaynaya bilyineerka reer Uzbek ee Alisher Usmanov, oo saami yar ku leh kooxda Arsenal – kaasoo sidoo weli ka tirsan kooxda Emirates – isla markaana hoggaaminaya dallad Ruushan ah.
Warsidaha ayaa dhanka kale werinaya in UEFA ay iyaduna diyaar u tahay inay waqtiga u dheereeyso kooxda Milan, iyadoo kulan horay loo muddeeyay 20-ka Abriil uu dhici doono horraanta Juun, si ay dhinacyadu meel isula dhigaan heshiis ku aaddan UEFA Financial Fair Play.
KASHIFAAD: Muxuu Jose Mourinho u sheegay ciyaaryahanadii Man United ee ooyey guuldaraddii Sevilla kaddib?
ARSENAL VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!